ရွှေနိုင်ငံ: ကျောင်းသားသပိတ် ဘာကြောင့် ကျဆုံးရသလဲ
ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်မပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်က (၂၆.၀၃.၂၀၁၅) ဒီကနေ့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖွဲ.စည်းခွင့်အပါအဝင် ဘတ်ဂျက် ၂၀ % စတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ အားလုံးနီးပါးကို ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲ မူရင်း အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကို အချို.စကားလုံး သုံးနှုံးမှုတွေလောက်သာ ပြင်ပြီး အတည်ပြုလိုက်ပါတယ် ။
ဒီလိုဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းတရား ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ မအောင်မြင်ရခြင်းကို သုံးသပ်ရရင် ..........
၁ ။ ကျောင်းသားစစ်စစ်များရဲ့ ဆန္ဒမဟုတ်ဘဲ NNER ရဲ့ ဆန္ဒကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အမှီ အစိုးရသိက္ခာချရေး (ပြုတ်ကျရေး) အချိန်ကိုက် လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ပေါ်လွင်နေခြင်း
၂ ။ ကျောင်းသားစစ်စစ်မျာသည် ဆောင်ပုဒ်များကို အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် အော်ရန် ၊ ကျောင်းသားသပိတ်အဖြစ် ခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်ရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခံရခြင်း
၃ ။ ဒေါက်တာသိန်းလွင်ရဲ့ ဗျူဟာအမှားဖြစ်တဲ့ ပါဝါဂိမ်းတည်ဆောက်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း
...... ဒေါက်တာသိန်းလွင် စုစည်းနိုင်ခဲ့သော အုပ်စုများမှာ နိုင်ငံရေး သြဇာမရှိကြသူများ ၊ အစိုးရကို အမြဲအောက်ကနေ ဆက်ဆံခဲ့ရသော အဖွဲ.များ နှင့် လူစဉ်မမှီသော အဖွဲ.များ ဖြစ်နေကြခြင်း ။ NLD ကိုမှီပြီး NLD ဝိတ်ကိုသုံးကာ
အစိုးရကို ဖြိုဖို့ ကျိုးစားခဲ့ပေမဲ့ NLD ရဲ့ အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်အရ ဒေါက်တာသိန်းလွင်ကို အဖွဲ.က ထုတ်ပြစ်လိုက်သောအခါ ၊ ကျောင်းသားသပိတ်ကို အားပြု ဖိအားပေး အကျပ်ကိုင်တဲ့ နည်းဟာ အစိုးရကို အရှက်ရစေဖို့သာ
ဖြစ်စေခဲ့သည့်အတွက် ၊ အစိုးရရဲ့ တန်ပြန်ဖြိုခွဲမှုကို ခံရခြင်းဖြစ်သည် ။ NLD က ဒေါက်တာသိန်းလွင်ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့လျှင်လည်း တက်တက်စင် လွဲမည့်အလွဲသာ ဖြစ်လာလိမ့်မည် ။
၄ ။ ကျောင်းသားအတုအယောင် မြောက်များစွာ ပါဝင်လာခြင်းက ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုကို ကျဆင်းစေခြင်း
အမြို.မြို. အနယ်နယ်က ကျောင်းသားသပိတ်ကို ထောက်ခံသူများမှာ NLD ပါတီဝင်များနှင့် အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဖိနှိပ်ခံထားရသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် ၊ ဝန်ထမ်းများ ၊ ကြံ.ဖွံ.ထောက်ခံသူနှင့် နိုင်ငံရေးနှင့် ဝေးသူများအား
မစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ ။ အကယ်၍ ကျောင်းသားစစ်စစ်များသာ ( ကျောင်းသားအင်အား အနည်းအများမလို) တကယ်နားလည် ၊ လိုအပ်လို့မှောက်တဲ့ သပိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီထက်ပိုအားကောင်းသော အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ
ပူးပေါင်းလာကာ (မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကဲ့သို့ ) ယထာဘူတကျသော တောင်းဆိုချက်များ အားလုံး အစိုးရအနေနဲ့ မဖြစ်မနေပေးရလိမ့်မည် ။
၅ ။ ကျောင်းသားအရေးထက် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ရှေ.တန်းရောက်လာခြင်း
အစိုးရဟာ ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေအချောက်ခံနေရတယ်လို့ စွတ်ဆွဲမှုတွေကို ဒီနေရာမှာ ပြန်ရှင်းရရင် .............. အကယ်၍ လက်ရှိ အစိုးရက ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို အယုံအကြည် မရှိတော့ပါဘူး ၊ ကွန်မြူနစ် စံနစ်ကို ပြောင်းလဲ
ကျင့်သုံးပါတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ၊ ကွန်မြူနစ်ကို ကြောက်နေတဲ့ အစိုးရလို့ စွတ်ဆွဲသူတွေ ဘာဆင်ခြေ ထပ်ပေးအုန်းမလည်း ။ အရှေ.ဥရောပ တခုလုံး ကွန်မြူနစ်စံနစ် ဘုံးဘုံးလဲ နေချိန် ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နဝေတိမ်တောင်
ကွန်မြူနစ် အတွေးအခေါ်လောက်နဲ့ နိုင်ငံကိုဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမလဲ ။ တိုင်းရင်းသား မျိုးစုံ ပြဿနာကို ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုစံနစ်ဖြစ်သော ကွန်မြူနစ် စံနစ်က ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ် ။
၆ ။ တောင်းဆိုမှုတွေကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးမဟုတ်ဘဲ အကျပ်ကိုင်သည့် ၊ မောက်မာသည့် ၊ ရာဇသံပေးသည့် ၊ သြဇာပေးသည့် အသုံးအနှုံးများစွာဖြင့် ဖိအားပေး ခြိမ်းချောက် အကျပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ဆန္ဒပြပွဲနှင့် မတူဘဲ ဆန့်ကျင်သည့်
တော်လှန်ရေး အသွင်ဆောင်နေခြင်း ။
၇ ။ သပိတ်ကို အားပေးသူများသည် ၊ တောင်းဆိုချက်များကို ဝေဖန် သုံးသပ်နိုင်စွမ်း မရှိကြခြင်း ၊ အကောင်းအဆိုး နောက်ဆက်တွဲများကို မသိရှိကြခြင်း
.......ချကွ ချကွ ဟု တချိန်လုံးအော်နေသူများသည် ပညာရေးဥပဒကို အာရုံမစိုက်ဘဲ သပိတ်ကိုသာ အာရုံစိုက်နေကြပြီး ။ သူတို့လက်လှမ်းမှီရာဖြစ်သော ချကွ ချကွ ဟုသာ အော်နေကြခြင်း ။
ပညာရေးဥပဒေထက် သပိတ်က ရှေ.တန်းရောက်လွန်းနေခြင်း ( ဆင်ခြင်တုံ တရားနည်းပါးသူများ )
၈ ။ နိုင်ငံတကာဖိအားကို သုံးဖို့ ဒေါက်တာသိန်းလွင်က သံရုံးတွေကို စာပို့ခဲ့တယ်
သံရုံးများမှ ၊ အချက်အလက် အတိအကျ ရထားဟန်တူသည့်အတွက် တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိ ၊ သပိတ်ဖြိုခွဲပြီးမှ အမေရိကန် သံရုံးက ဒီအဖြစ်အပျက်မှ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ကြစေဖို့စာထုတ်တယ် ။
ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ချေးထက် ရွံတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေက ဒီလိုသပိတ်မျိုးကို ဘယ်လိုမှ ထောက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မတွက်ချက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး ။
ပြည်တွင်းမီဒီယာ အတော်များများက ဘက်လိုက်ရေးသားခဲ့ပေမဲ့ မည်သည့် ပြည်ပမီဒီယာကမှ ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဖြိုခွဲပြီးမှ သတင်းများလောက်သာဖေါ်ပြခဲ့ကြတယ် ။
အကြောင်းက ပြည်ပမီဒီယာတွေ နားမလည်နိုင်တဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ သပိတ်ထဲမှာ ပါဝင်နေလို့ပဲ ...
ဥပမာ ...... သပိတ်လား တော်လှန်ရေးလား မကွဲပြားခြင်း ၊ ပညာရေးတောင်းဆိုမှုလား ကွန်မြူနစ်စံနစ် ပေါ်ထွန်းရေးလား မကွဲပြားခြင်း ၊ NLD သပိတ်လား NNER သပိတ်လား ဗကသ သပိတ်လား ကျောင်းသားသပိတ်လား
ကွဲကွဲပြားပြား မရှိခြင်း ။ တောင်းဆိုချက်များမှာ အရှိတရားများနှင့် ဝေးကွာလွန်းပြီး ၊ စိတ်ကူယဉ် ဆန်လွန်းနေခြင်း ။
၉ ။ သူရဲကောင်းများ ပေါ်ထွက်မလာခြင်း
အကယ်၍ အစိုးရက ဖြိုခွင်းမှုမှာ လူသေစေခဲ့လျှင် ။ ထိုသေသူကို အကြောင်းပြု ဆူပူရန် တချိန်လုံး ကျိုးစားနေခဲ့သော်လည်း ။ သေသည့် သူရဲကောင်း မပေါ်ထွက်လာခြင်းကလည်း မအောင်မြင်ခြင်း အကြောင်းတရပ်ဖြစ်သည် ။
၁၀ ။ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိခြင်း ။
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးတွင် ဖြစ်ခဲ့သမျှသော သပိတ် နှင့် တော်လှန်ရေးများ ကျဆုံးကြရခြင်း အကြောင်းတရားမှာ ၊ Plan B မရှိခြင်းနှင့် ၊ ဘယ်လို အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာ မသိခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။
ပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ရန်ထက် ၊ သပိတ်ရန်ကုန်ဝင်ရေးက ပိုအရေးကြီးနေသည် ။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးစံနစ် ကောင်းစေလိုတဲ့ စေတနာထက် ၊ ဗကသရဲ့ သမိုင်း ဂုဏ်သိက္ခာက ပိုအရေးကြီးနေသည် ။ ဗကသက
အစိုးရကို အောင်နိုင်လိုက်သည်ဟု မှော်ကွန်းထိုးချင်ကြသည် ။
၁၁ ။ ပြည်ပနိုင်ငံ ပရောဂများ အပြည့်အဝ ပါဝင်နေခြင်း
.......... NNER ရဲ့ သုံးစွဲစရိတ် ၊ NNER ဦးဆောင်သူ အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ မရှိသူ ဒေါက်တာသိန်းလွင်ရဲ့ စားဝတ်နေရေး ၊ သုံးစွဲစားရိတ် ဘယ်သူက ထောက်ပံ့ပါသလဲ ။ ဘာသာခြားတွေ ပညာရေးကျောင်းများ လွတ်လွတ်လပ်လပ်
ဖွင့်ခွင့် ရရေးဆိုတာ တွေဟာ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးလို့ အထူးပုဒ်မ ပြင်ဆင်ချက်တွေ ဖြစ်နေရတာလဲ ။ နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့တဲ့ ငွေကြေးများကို လက်ခံရန် ပုဒ်မတွေက ဘာကြောင့် အရေးကြီးနေရပါသလဲ ။ ဘယ်နိုင်ငံကမှ သူတို့
အကျိုးစီးပွားအတွက် မပါဘဲ စေတနာသန့်သန့် ထောက်ပံ့မည်မဟုတ်ကြောင်း မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာရဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေကို သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ပါတယ် ။ ဆော်ဒီလို ချမ်းသာတဲ့ OIC နိုင်ငံတွေဟာ ကမ္ဘာကို ဖျက်မဲ့သူတွေမွေးပြီး ၊
ကမ္ဘာလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းချောက်၍ ဘာသာရေးပါဝါ တည်ဆောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေသာဖြစ်တယ် ။
၁၂ ။ သူတို့တောင်းသမျှ အချက်တွေကို ၏ သည် မလွဲ ပေးရမယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ချက် ထောက်ပြချက်တွေကို ငြင်းပယ်ခြင်း ။
ိ၁၃ ။ သပိတ်စုံ သူပုန်ထရန် ကျိုးစားခြင်း
......... ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့် မိချောင်းကန် သပိတ်ကဆန္ဒပြသူတွေကို တရားစွဲရုံ အနေအထားကနေ ထောင်ပါချပလိုက်တယ် ။ ရွှေပြည်သာ အလုပ်သမားသပိတ်တွေကို မညှိနှိုင်းတော့ဘဲ ဖြိုခွဲခံလိုက်ရတယ် ။
၁၄ ။ ရန်ကုန်ကို သပိတ်ဝင်ပြီးရင် စောင့်ကြည့်ရေးရုံးခန်းဖွင့်ပြီး ၊ လွတ်တော်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စောင့်ကြည့်မယ်လို့ ပြောခဲ့ခြင်း
ဘယ်လို အစိုးရမျိုးကမှ လွတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အခြေအမြစ်မရှိသူတွေက စောင့်ကြည့် ၊ ဟိုလိုလုပ်ပါ ဒီလိုလုပ်ပါ လျှာရှည် ၊ စိတ်တိုင်းမကျတိုင်း ခဏခဏ ဥပဒေမဲ့ ဆန္ဒပြနေတာကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ။ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်ခံရလို့ ကျမဲ့သိက္ခာထက် ထောင်ထဲထည့်ထားလို့ ကျတဲ့သိက္ခာက သက်သာအုန်းမယ် ။
၁၅ ။ စစ်အာဏာရှင်ကို အတိုက်အခံများအနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်အောင် မတိုက်နိုင်ခဲ့သလို ၊ နောက်လည်း နိုင်မည်မဟုတ် ဆိုသည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင် ဖြစ်သည် ။
.......... အချိန်မရွေးစစ်အာဏာ ပြန်သိမ်းနိုင်သည်
..........အစိုရတွင် နှစ် ၆၀ ကျော် နိုင်ငံရေး အတွေ.အကြုံကောင်းများ ရှိနေကြသည်
..........နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ ခန့် ဆက်လက် အုပ်ချုပ်ရန် ပြင်ဆင်ပြီးကြောင်း ၄င်းတို့၏ စီမံကိန်းများ ၊ ပြောစကားများ ၊ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများကို အပေါ်ယံကြည့်ရုံဖြင့် သိသာနိုင်သည် ။
...........အတိုက်အခံဘက်တွင် အစိုးရနှင့် ဥာဏ်ရည်ယှဉ်နိုင်သူ တဦးတယောက်မျှ ပေါ်ထွက်မလာခြင်း (ဒေါ်စုရှိသားပဲဟု အကြောင်းပြလျှင် မှားသည်) ၊ ဒေါ်စုရရှိထားသည့် ထောက်ခံမှုမှာ ပြည်သူအချို.က အစိုးရကို မုန်းလွန်း၍
ရွေးစရာလမ်းမရှိ ထောက်ခံမှုရနေခြင်း ဖြစ်သည် ။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းများကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိ ၊ ပြည်သူများ ဖေါ်ဆောင်သော လမ်းကြောင်းပေါ် ခပ်တည်တည်
နေရာယူလျှက် နိုင်ငံရေး လုပ်စားနေခြင်းဖြစ်သည် ။ အခြေခံ ဥပဒေပြင်မည်ဟု ကြွေးကျော်ကာ လွတ်တော်ထဲ ဝင်သွားသော်လည်း ၊ သူမ ပြင်ဆင်လိုသည့် ဥပဒေမှာ သူမ သမ္မတဖြစ်ရေး ပုဒ်မ ၅၉ သာဖြစ်သည် ။ ထို ၅၉ ကိုသာ
မဲပြီး ပြင်ချင်ပေမဲ့ ဥပဒေကို နားမလည်ကြောင်း သိသာစေသည့် အချက်မှာ ၅၉ ကို ဟန့်တားထားတဲ့ ၄၃၆ ရှိနေခြင်းကိုပင်မသိ ။ ဦးဝင်းချို နှင့် နေမျိုးဇင်က ၄၃၆ မပြင်ရင် ၅၉ ကိုထိလို့ မရဘူးလို့ ထောက်ပြလိုက်မှ ၄၃၆
ပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီး လက်မှတ်တွေ ထထိုး အရှက်ကွဲရပြန်သည် ။ လူဦးရေ သန်း ၅၀ရှိသည့်အနက်တွင်မှ လူထုခေါင်းဆောင်ဟု ပြည်ပြေးများ အချိန်ပြည့် လော်ဘီလုပ်နေသူသည် ပြည်သူအားလုံး၏ ထောက်ခံမှုကို မရခဲ့။
ထို့ထက်ပိုဆိုးသည်က ၄၃၃ ကိုမပြင်သရွေ. ၄၃၆ ကိုလည်း ပြင်လို့မရကြောင်း တပ်ကုန်းမှ အဖိုးအိုတဦးက ထောက်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတကြိမ်တွင်တော့ ၄၃၃ ပြင်ရမည်ဟု မပြောတော့ အကြောင်းက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲက နီးလာပြီ ဖြစ်သည် ။
ဒေါ်စုမရှိရင် ဘယ်သူ့အားကိုးမလဲလို့ မေးရင်တော့ ဒေါ်စုမရှိခင်ကရော ဘယ်သူ့ကိုအားကိုးခဲ့လည်းဟု ပြန်မေးရမည် ။ ဦးနေဝင်း အစိုးရကို ဖြုတ်ချခဲ့သူသည် ဒေါ်စုမဟုတ် ။ ပြည်သူတွေက သူတို့
လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နေကြသည် ။ ဒီနေရာတွင် ဒေါ်စုအကြောင်းပြောရခြင်းမှာ အစိုးရကို တော်လှန်နိုင်သူဟု လူအများ အထင်မှားနေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ။
ဒေါ်စုသည် အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာဖိအား အပေါ်တုံ့ပြန်ရန် မွေးထားသည့် တန်ဆာခံ အဆင့်သာရှိသည် ။
(အကြောင်းအကျိုးဆီလျှော်လှသော ဤပိုစ့်ကိုရေးသားသူ / ကိုရဲသူရိန်မင်းကို လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြု လျှက် ....လောကနတ်)